Vanhu Mamiriyoni Makumi Mashanu Vanonzi Vanogona Kuziya neNzara muSADC
Kurume 17, 2016
Masangano anobatsira nechikafu munyika anoti Oxfam, Save the Children neCare International akurudzira nyika dzakabudirira, masangano anopa rubatsiro nehurumende dzekuchamhembe kweAfrica kuti vabatane mukutsvaga mari yekutengera vanhu zvekudya.
Masangano anobatsira nechikafu munyika anoti Oxfam, Save the Children neCare International akurudzira nyika dzakabudirira, masangano anopa rubatsiro nehurumende dzekuchamhembe kweAfrica kuti vabatane mukutsvaga mari yekutengera vanhu vemudunhu iri zvokudya nechimbichimbi sezvo vanhu vakawanda vatarisana nenzara isina mukare akamboona.
Masangano matatu aya aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti hurumende hadzingofanire kubatsira nechikafu chete, asi zvikwanisiro zvimwe zvakaita semadiridzo uye madhamu sezvo mamiriro ekunze oramba achichinja.
Masangano aya ari kuyambirawo kuti vana vadiki vari parumananzombe nenyaya yekushaya chikafu.
Nzara iyi yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kwemwaka miviri yakatevedzana.
Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu vanonzi vakatarisana nenzara mudunhu iri pari zvino.
Asi Mutevedzeri wemukuru weOxfam muZimbabwe, VaKevin Ndemera, vanoti huwandu uhu hunogona kukwira kusvika pamamiriyoni makumi mashanu.
Masangano matatu aya anoti ari kufara kuti SADC yatara dambudziko sechinhu chakakomba kana kuti Declaration of Regional Disaster zvichabatsira mukutsvaga mari.
MuZimbabwe pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mana vakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu.
Hurukuro naVaKevin Ndemera